Archive du 05-avril-2022
Vaky tanteraka ny ady Nokianin’i Brunelle i Rajoelina sy ny MAPAR
Naneho ny heriny sy ny tanjany tamin’ny alalan’ny famoriam-bahoaka ny depiote voafidy tany Ikongo sady Filoha Lefitry ny antenimieram-pirenena Brunelle Razafitsiandraofa.
Tsy efa mba nahazo lesona ve ?
Tsy misy fampianarana mihoatra ny zava-misy iainana ankehitriny insony angamba eo amin’ny resaka fitantanana firenena.
UKRAINE TAFIAKATRA 1417 NY SIVILY MATY
Feno 40 andro katroka omaly alatsinainy ny fanafihana ataon’i Russie any Ukraine. 1417 ireo sivily efa namoy ny ainy, ka ankizy ny 121 amin’ireo, araka ny tatitry ny Birao misahana ny zon’olombelona eo anivon’ny Firenena
Mandrangobato Anosibe Trano 24 tafo no may kilan’ny afo
Trano 24 tafo no indray may kilan’ny afo tao Mandrangobato Anosibe ny alin’ny alahady teo. Tokantrano miisa 29 no lasibatra tamin’izany ahitana olona mihoatra ny 100.
Ady amin’ny fanararaotana ara-nofo Mampitombo traikefa ireo mpitandro ny filaminana
Tsy afaka miala amin'ny fandrosoan'ny teknolojia isika eto Madagasikara ary indrindra amin'ny fampiasana ny aterineto.
Hani-masaka tsy ara-pahasalamana Misy fiantraikany ratsy amin’ny atidoha
Marobe ny malagasy ankehitriny no zatra mihinana hani-masaka eny amin’ireo mpivarotra amoron-dalana. Noho ny rotorom-piainana sy ny hamoran’ireny sakafo ireny amin’ny ankapobeny no mahatonga izany.
Oniversiten’Antananarivo Mitaky ny karamany sy ireo tombotsoany ny PAT
Niditra tamin’ny fitokonana, ka nanakan-dàlana ny mpandraharaha PAT (Personnel Administratif et Technique) eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo omaly.
Fandrobana harem-pirenena Vatosoa 55 taonina tratra teto Antananarivo
Tsy mety voafehy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fikasana hanondranana harena an-kibon’ny tany .Vatosoa milanja 55 Taonina eo ho eo no saron’ny Polisin’ny Harena an-kibon’ny tany (Police des Mines) teto an-drenivohitra,
Anosipatrana andrefana Olona 200 no lasibatr’ilay fako avangongon’ny kaominina
Nataon’ny kaominina fanatobiana fako vonjimaika ny etsy amin’ny Fokontany Anosipatrana Andrefana manamorona ny digy .
Fiompiana sy fambolena Tantsaha 165 notolorana fampitaovana
Nisitraka fanampiana ara-pitaovam-pamokarana sy famatsiana biby fiompy (omby, ondry) ahafahan’izy ireo mampivelatra sy mampiroborobo ny sehatra fiompiana izay efa niveloman’izy ireo teo aloha ny vondrom-pamokarana
Diplaomasia sy jeopolitika Tezitra amin’i Madagasikara ny Iraisam-pirenena…
Navoakan’ny fampalalam-baovao vahiny ny faran’ny herinandro lasa teo ny fifamatorana ara-tafika eo amin’i Madagasikara sy Rosia, izay voalaza fa nosoniavina ny 18 janoary 2022,
Pastera Heritiana “Mampilentika firenena ny vavaka mihatsaravelatsihy”
Mandeha ny feo eny anivon’ ny fiaraha-monina fa arakaraky ny mahabetsaka ny fiangonana miorina etsy sy eroa eto amintsika no vao mainka mampilentika ny firenena sy mampahazo vahana ny tsy fandriampahalemana.
Savorovoron’ny mpitantana ao Mahajanga Atsaharo fa mahamenatra, hoy FIZAMAMI
Nivoaka tamin’ny fahanginany ka nanao fanambarana hentitra ny FIZAMAMI (FIkambanan’ny ZAnaka MAhajanga MIray)
Varotra sy fanjifana Mampitandrina ireo mpanararaotra vidin’entana ny fanjakana
Taorian’ny fihaonana sy ny dinika nifanaovan’ny Minisiteran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tarihin’Atoa Edgard Razafindravahy tamin’ny mpamongady omaly maraina,
Christine Razanamahasoa Nihaona tamin’ny SGP teo aloha sy ny vaovao
Araka ny tatitra, noraisin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny Sekretera Jeneraly teo aloha sy vaovao eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika,
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Hampitomboina ireo jiro manazava tanàna manerana ny nosy
Asiana jiro hanazava ny tanàna avokoa manerana ny Nosy manomboka izao hahafahana miady amin’ny tsy fandriampahalemana.
Ecran plat, bonbon sucette, volamena, CNaPS… Mitaky ny hivoahan’ny marina ny KMF/CNOE
Namoaka ny fomba fiijeriny mikasika ny raharaham-pirenena ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olom=pirenena, izay nitsinjara tamina teboka maromaro.
Fikambanana « Porte Bonheur » Nanampy ireo zokiolona teny Alasora
Tsy nanadino ireo Ray aman-dReny nahitana masoandro ny fikambanana Porte Bonheur tahirin-dRazaka Mireille, vadin’ny Ben’ny tananan’Alasora.
Taxi be Maro ireo efa manao taingim-be
Efa tena maro ireo taxi be eto Antananarivo sy ny manodidina no iverina amin’ny fanaovana taingim-be indray.Tsy 4 intsony ny amin’ny seza fa lasa 5 milahatra, i
Kaominina Alasora Mitohy ny fametrahana jiro isam-pokontany
Laharam-pahamehana ho an’ny kaominina Alasora, distrikan’Avaradrano ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. Lohalaharana amin’izany ny fametrahana jiro hazava ny tanàna.
Asam-panjakana Mpiasa matoatoa 330 indray no tratra
Raha ny tatitry ny gazety boky mivoaka isan-kerinandro eo anivon’ny ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia nisy mpiasam-panjakana matoatoa 330 indray no tra-tehaka.
Nolazaina fa fahavalom-pirenena hatrany izay sahy manakiana sy mitsikera ny zavatra tsy mety ataon’ny Fanjakana. Nandeha ny vava be hoe: izahay aloha izao no mitondra fa mahandrasa fifidianana manginy fotsiny.